Filtrer les éléments par date : samedi, 09 février 2019
dimanche, 10 février 2019 00:13
Andriamena-Tsaratanana: Olona telo nisy naka an-keriny, mitaky 10 tapitrisa ireo jiolahy
Ny zoma 8 febroary tamin'ny sivy ora alina no nitranga ity fakana an-keriny ity, tao amina tanàna 2km miala ny renivohitry ny Kaominina Andriamena.
Mpivady miampy tovolahy iray no nalain'ny jiolahy an-keriny. 10 tapitrisa Ariary no takian'ireo jiolahy ho tambin'ny famotsorana azy mivady. Nihena ho 8 tapitrisa Ariary izany androany, araka ny fampitam-baovao nataon'ny depioten'i Tsaratanana teo aloha.
Nanamarika ity farany fa olona miady ary mifampitory any amin'ny Fitsarana ireto mpivady sy ilay tovolahy nisy naka an-keriny ireto.
dimanche, 10 février 2019 00:10
Ambatomainty (Melaky): Omby 50 lasan'ny dahalo
Dahalo telopolo lahy no nanafika tao antampon-tanana ny alin'ny zoma hifoha ny sabotsy 9 febroary. Nirefodrefotra ny basy nadritra ny ora iray sy sasany, naharetan'ny fanafihana sy vaky vala.
Efa ora vitsivitsy taty aoriana, ary efa dila ireo olon-dratsy vao tonga ny mpitandro ny filaminana.
Omby miisa 50 no lasan'ireo taorian'izay. Any ampanarahan-dia ny Fokonolona sy ny Zandary amin'izao.
dimanche, 10 février 2019 00:09
Ambatomainty Antananarivo faha-5: Nisy namaky ny biraon'ny Fokontany
Maraina no tsikaritry ny olona fa nisy namaky ny biraon'ny Fokontany Ambatomainty. Nisavoritaka ireo antotan-taratasy tao anatiny.
Sinton-kevitra enti-matory Zandry
Raha ny fahafantarako anao Zandry dia tsy mbola matory ianao amin'izao ora efa hisasak'alina izao, fa mbola miasa, ary tena mitady izay hevitra rehetra ampandrosoana ny Firenentsika.
Tsy hiadian-kevitra izay, ary fantatro fa tsy niova amin'izay tanjona izay ianao.
Misintona hevitra kely anefa aho. Taorian'ny Fianiananao tetsy Mahamasina dia nanaiky anao avokoa ny rehetra, na dia teo aza ny samboaravoaran'ny resaka vokam-pifidianana, tsy hiverenana intsony iny.
Fantatro ianao fa olona tena mijery ny zavatra na faran'izay bitika aza, anisan'izany ny fitafy anaovanao, ny fihetsikao. Nahafinaritra ahy manokana ny nanaovanao nœud sy lobaka fotsy, tsy nisy loko politika, ary namafisinao izany tamin'ny kabary izay nataonao, fa ho Filohan'ny Malagasy rehetra ianao, na ny nifidy anao na ireo nanana safidy hafa hoy tsara ny teninao. Nolanjalanjainao mihitsy aza ny teninao ka tsy nilaza ianao hoe ireo izay nifidy ny mpanohitra anao, mba tsy hilazana hoe ireo adversera politikanao.
samedi, 09 février 2019 10:20
Moramanga: Vehivavy bevohoka maty niaraka tamin'ny zaza tao am-bohoka noho ny tandrevak'ilay rasazy araky ny voalazan'ny fianakaviana
Mbola tany an-tranony, andro sabotsy ilay renim-pianakaviana no nitaraina maharary kaikerin-jaza. Nantsoina ilay mampivelona, ary tonga nijery azy tokoa, avy eo nilaza fa fomban-javatra io fa miandriandry fa tsy mbola ho teraka.
Tsy niato ary mihamatetika ny fanaintainana ka nentina namonjy hopitaly andro alina ilay bevohoka, nefa nahazo ny aza manaitra fa mbola matory ny fianakaviana.
Niera raha afaka miantso dokotera hafa ny fianakaviana nefa nahazo fandraràna.
Reraka noho fiaretana ny hetsi-jaza ilay reny bevohoka ka niafara tamin'ny famoizany aina ny Alahady teo ; tsy azo ihany koa ilay zaza tao am-bohoka. Zanany faharoa io nafoy io.
Nalevina ny alarobia teo ny razana. Nampiantso mpanao gazety nampahalala ny zava-misy sy ny alahelo ny fianakaviana. Nametraka fitoriana izy ireo.
samedi, 09 février 2019 09:45
Ampasy Nahampoana : Vaky ny fasana, taolambalo sivy very
Tao Betaligny, tanàna iray ao amin'ny Kaomina Ampasy Nahampoana, Distrika Tolagnaro no nitrangan'ity vaky fasana ity. Mpiarakandro no nahatsikaritra ny fasana omaly zoma 08 febroary.
Razana sivy no nosavoritahin'ireo olon-dratsy nakana taolana.